Players DVD for Windows 8
Yaabaa in aad dareentay markii aad bilowday aad Windows 8 computer markii ugu horeysay in wax ay ka maqan. Magac ahaan, ciyaaryahan DVD ah. Microsoft go'aan in qayb ka mid ah sababta oo caan sii kordhaya ee hoorto videos. Waayo, malaayiin oo ay weli DVDs, si kastaba ha ahaatee, waxa ay ka tegey iyaga oo aan hab si aan u daawado ay computer aan loading software dheeraad ah. Warka fiicani waxa weeye, taas macneheedu waxa weeye waxaad ka qaadan kartaa ciyaaryahanka DVD aad rabto in aad isticmaasho. Bal aan eegno tobanka ciyaaryahan ee ugu fiican DVD aad isticmaali kartaa Windows 8.
Shaki la'aan, taasi waa ciyaaryahan DVD ugu caansan oo lacag la'aan ah waxaad ka heli kartaa. Waa barnaamij u furan il shaqeeya ee kala duwan ee nidaamyada hawlgalka iyo magac computer, iyo ka ciyaari kara tirada mid kasta oo ka mid ah qaabab video iyo dvd. Waxa kale oo ay xamili karaan hoorto video, sidoo kale. No downloads codec yihiin sida caadiga ah loo baahan yahay, sababtoo ah waxaa la Timaadda oo dhan oo iyaga ka mid hore u raran. Waxaad samayn kartaa dheellitirka qarbeddaduna haddii aad sidaa doorato. Interface waa fududahay in la fahmo iyo sida loo isticmaalo, tan iyo laylis users computer.
2. Media Player Classic Home shaneebada
Barnaamijkan waa bilaash ah si degdeg ah si ay u bilaabaan marka bilaabay iyo waxa aanu soo qaadan oo aan qolka badan ku wadid aad u adag. Waxa ay u muuqataa badan sida version weyn ee Windows Media Player, sidaa darteed haddii aad ayaa si raaxo leh u isticmaalaya, waxaad dareemi doonaa xaq at home. Waxa aanu aad u baahan tahay sida user ka raadsan warbaahinta mar kasta oo marka aad rabto in aad si aad u daawato video badan ugu dhawaan daawaday wax kale. Sidoo kale ma xusuusan booska video ah marka aad riixdid batoonka joogsiga. Taas oo uu sheegay, waxa ay ka ciyaari karaan oo keliya ma aha, laakiin DVDs kale videos in aad video folder.
Barnaamijkan waxa ay awoodaan in ay ciyaari ugu badan ee qaabab video halkaas, iyo sidoo kale DVD-aad. Interface waa nadiif ah iyo barnaamijka uu leeyahay tiro ka mid ah codecs ka mid ma sidaas in aad sugto, waayo, waxyaalaha kale ee ay u soo bixi halka aad rabto in aad ka ciyaari filim. Waxaad fursadaha aad kala dooran karto si aad u hesho codka ugu wanaagsan oo ay ula socdaan xal suurto gal ah. Waxaa goolka barbaraha waxaad isticmaali kartaa oo calan kor u sida aad u rabto subtitles ay u shaqeeyaan, iyada oo qaar ka mid ah fursadaha la heli karo xitaa marka aad u ciyaareyso filim. Xataa waxaad fursad u haysataa in aad isticmaasho telefoon smart sida aad hago.
Sug, ma aan odhan jiray, a windows media player ma ahaa mar dambe? In ka yar. Inkasta oo ay mar dambe yimaado pre-guraa galay your computer, weli waa barnaamij Microsoft waxay bixisaa sida add-on. Waxa uu leeyahay oo dhan mid ah qaababka aad u jecel yihiin - DVD oo loo maqli CD, daawado iyo bandhigyada record telefishanka, iyo abaabulo playlists. Marka aad soo bixi waxay, in aad sidoo kale dooran kartaa fursad u express, ama aad astaysto aad loo xirxiro si ay leeyihiin xaqa ah muuqaalada in aad rabto. Markaas marka aad rabto in aad u ordaan filim, kaliya aad u baahan tahay in ay ku mari xaqa, guji raadinta, ka dibna ku qor in Windows Media Center. Waxaad noqon doonaa off oo socda.
Tani waa barnaamij lacag la'aan ah in sidoo kale waa il furan. Waxaa ordi karo tiro ka mid ah nidaamyada hawlgalka, xataa qalabka la qaadi karo, si aad u isticmaali kartaa telefoonka smart sida rimuut koontaroolka kaas oo. Haddii aad u baahan tahay taageero, tani waa mid ka mid ah barnaamij uu leeyahay tiro ka mid ah fursadaha taageero la heli karo, oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo dhufto ee warbaahinta bulshada. Interface waa mid aad u soo jiidasho leh, iyadoo gacanta ku ku taalla dhanka bidix, xajmi yar oo ku filan in aanay faragelin aad bandhigay. Ma ciyaari karo DVD kaliya, waxa kale oo sii qulquli karaan live videos, xitaa barnaamijyada baahin.
Ma ahan fanaaniinta, laakiin barnaamijkan kuu ogolaanaysaa inaad ciyaaro aad DVDs iyo sidoo kale tirada mid kasta oo videos on your computer. Waxay leedahay cod ah oo tayo fiican leh iyo xallinta video. Waxaad gacanta ku saabsan toolbar sabayn ama waxaad heli kartaa adigoo gujinaya xaq meel kasta oo shaashadda. Toolbar Taasi waa joogo oo dhan, marka aad daawado aad movie ee shaashad buuxda, si kastaba ha ahaatee. Waxaa jira fursado luqad aad sameyn kartaa sida aad rabto in aad. Waxaa jira feature bookmark taas oo Caawo ee soo socda in ay goobaha aad jeceshahay dib ah. Waxa kale oo aad qaadan kartaa screencaps of daqiiqado weyn.
Ciyaaryahanka Tani free xamili karaan Blu-Rays iyo sidoo kale DVDs joogto ah, wax ciyaartoy badan ma awoodaan inay, gaar ahaan kuwa lacag la'aan ah. Taas macnaheedu waxa weeye waxa ay sidoo kale ka ciyaari karaan qeexitaanka sare video files xalinta 1080p. Iyadoo in ka badan 400 oo codecs ka mid ahaa, ma yeelan doonaan inaad sugtid si aad u daawato aad movie halka file ah oo uu soo bixi. Its interface waa mid aad u nadiif ah, iyadoo gacanta ku ku yaalla xagga hoose ee shaashadda. Waxaad reserved kartaa subtitles iyo sidoo kale fursadaha video.
8. AHV Media Player
Barnaamijka Tani waxay sidoo kale waa lacag la'aan. Waxa ay aqoonsan tahay in dad badan ay computer isticmaali hadda xarun ay xarun madadaalo guriga, si AHV kuu ogolaanayaa inaad ka faa'iidaysato ilaa set in. Waxaad isticmaali kartaa dhisay-in goolkii barbaraha audio kuu oggolaanaysa in aad maqli multi-channel audio iyada oo ku hadla aad, ay ka mid yihiin 7.1. Sababtoo ah ee ay awoodda, waa qayb ka ah kuwa dhaqda khayraadka on your computer ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa sida DVD gubi ah, si videos aad leedahay on your computer la gelin karaa si disc. Waxaa jira set la taaban karo ee la dhisay-in codecs dhisay xamili karaan tiro balaadhan oo ah video files idinku sugan in.
9. Blu-ray Player for Windows
Haddii aad u jecel yihiin inay ku ciyaaraan Blu-Rays (oo dhab ahaantii, aan?), Ciyaaryahankaan kaa caawinaysaa in aad sameeyo on your computer. Ma ahan freeware, laakiin waxaad ka heli mar la taaban karo maxkamad si ay u tijaabiso soo baxay - 90 maalmood. Waxay leedahay awood ay ku aqoonsan dibadda iyo sidoo kale ciyaaryahano gudaha, ilaa iyo inta aad ku leedahay xiriir internet ah si liisanka loo maqli karo waxaa laga heli karaa. Laakiin, ma aha oo keliya ciyaari Blu-Rays. Waxaad sidoo kale ka ciyaari kara ku dhowaad mid ka mid ah qaab video ku yaal, oo waxaa la falgala aad xisaab warbaahinta bulshada si aad u wadaagi karaan macluumaadka saaxiibadaa iyo taageerayaasha. Waxaa iman mayso badan oo ka mid ah qaababka kale, laakiin waxaad ku dari kartaa subtitles haddii aad rabto.
10. Real Player More
Real Audio ayaa jahaysteen baxay sanadihii la soo dhaafay si ay uga mid video, iyo haatan in Windows ma sii hayaa Windows Media ee la nidaamka qalliinka, ay diyaar u tahay awoodana in ay tallaabo yihiin. Real Player Plus waa version sare dhammaadka Real Player oo karaankeeda xamili ciyaaro DVD. Way fududahay in la isticmaalo - waxaad samayn lahaa mar haddii la soo bixi oo dhan waa barnaamij u furan, shuban DVD aad, guji Library, falgali in CD / DVD, oo guji track aad rabto in aad bilowdo daawashada.
Sida aad arki karto, aad doorashooyin tiro badan yihiin marka ay timaado raadinta ciyaaryahan DVD ah ee aad Windows 8 computer. Ma hadhi Waxaad dhaxanta kasta oo dheer.
Top 10 Android Apps File Transfer inay isku bedelasho Android Files
Top 30 video converters u Mac
> Resource > Top List > Top Toban DVD Best Players for Windows 8